XOG: Cristiano Ronaldo illaa Ole Gunnar Solskjaer - 5 Ciyaartoy Oo Baal Dahab Ah Kaga Qoran Taariikhda Manchester United Oo Aan Waligood Gool Ka Dhalinin Liverpool Oo Joogta Anfield - GOOL24.NET
XOG: Cristiano Ronaldo illaa Ole Gunnar Solskjaer – 5 Ciyaartoy Oo Baal Dahab Ah Kaga Qoran Taariikhda Manchester United Oo Aan Waligood Gool Ka Dhalinin Liverpool Oo Joogta Anfield
Manchester United iyo Liverpool ayaa garoonka Old Trafford ku kulmi doona toddobaadka dambe kulan ka tirsan horyaalka Premier League, kaas oo Reds ka caawin doona inay hoggaanka kala baxdo Man City amaba noqon doona mid musiibo ah oo ay kaga samirto horyaalkii ay hoggaankiisa muddada dheer soo haysay.
Axaddii toddobaadkii hore, Sergio Aguero ayaa dhaliyey goolkiisii 160aad ee horyaalka Premier League, waxaanu kaalinta siddeedaad ka galay liiska ciyaaryahannada ugu goolasha badan taariikhda horyaalkaas, hase yeeshee dhibaato ayuu la kulmaa marka uu Liverpool ka hor tago, gaar ahaan ciyaaraha ka dhaca garoonka Anfield. Toban ciyaarood oo kooxdiisa uu u raacay Anfield, dhamaantood waxa uu kala soo laabtay faro madhan.
Aguero maaha ciyaartoyga kaliya ee ay inkaar kaga dhacday kulamada hoyga Liverpool ee Anfield, waxaase jira ciyaaryahanno baal dahab ah kaga qoran taariikhda kooxda ay deriska yihiin ee Manchester United, kuwaas oo rikoodho badan oo ay dhigeen sannado badan la xasuusnaan doono, hase yeeshee taariikh madow ay u taallo Anfield.
Halyeygii Ryan Giggs ayaa mar la weydiiyey garoonka ugu adag ee uu ku ciyaaro amaba dhibaatada ugu badan kala kulmo, waxa uu si fudud u sheegay inuu yahay Anfield, halka difaacii Man United ee Silvester oo afar koob oo horyaalka ah kula guuleystay kooxdaas uu ku sifeeyey Anfield ereyadan: “Waxaad dareemaysaa inaad gelayso CADAAB. Laguma soo dhoweynayo, waxaana hubaal ah inaad nacayb dareemayso. Waa deegaan colaadeed, waxaana xusid mudnaanaysa qaabka aad uga falceliso.”
Odhaahdan Silvester, waxa la qaba xiddigo kale oo isla kooxdaas ah, kuwaas oo dhabarka kaga soo jabay isku-day kasta oo ay ku doonayeen inay shabaqa kusoo taabtaan.
Haddaba, waxaanu halkan idiinku soo gudbinaysaa shan halyey oo aan weligood ka go’i doonin taariikhda Man United oo aanay u suurtogelin inay wax goolal ah ka dhaliyaan Liverpool oo joogta garoonkeeda Anfield:
Waxa loo yaqaanaa boqorka Manchester United. Marka lasoo qaado magaca kooxda, way adag tahay in isagana laga reebo, sababtoo ah, guulaha ay gaadhay waxa uu ahaa raggii seeska u dhigay.
Sannad ka hor intii aanu heshiiska u saxeexin Manchester United, waxa uu ku dhowaaday inuu ku biiro Liverpool, haser yeeshee tababarihii Reds ee waqtigaas ayaa ka gaabiyey inuu qaado tallaabadii uu kusoo xero-gelin lahaa, ugu dambayna Man Untied ayaa uu kasoo jeedsaday.
Cantona muddo 5 sannadood ah oo uu u ciyaarayey Manchester United, waxa uu ahaa hoggaamiyaha laysku raacsan yahay ee kooxdaas, waxaanu ahaa ninka qaata laag kasta oo muhiim ah oo ay kooxdu hesho, laakiin dhibaatada heshay waxay ahayd in aanu weligii gool ka dhalinin Liverpool oo joogta garoonkeeda Anfield, wuxuuse dhaawacii ugu weynaa u geystay sannadkii 1996kii oo finalka FA Cup ay iskugu soo baxeen Manchester United iyo Liverpool oo ku wada ciyaaray garoonka Wembley, waxaana uu Cantona dhaliyey gool qalbiga ka jabiyey Reds oo uu guusha koobka ku siiyey Red Devils.
Ka hor intii aanu ku biirin Manchester United sannadkii 1992-kii, waxa uu usoo ciyaaray kooxaha Auxerre, Martigues, Marseille, Bordeaux, Montpellier, Nîmes iyo Leeds United, waxaana uu ciyaaraha kaga fadhiistay Manchester United oo uu kula guuleystay afar horyaal oo Premier League ah, laba League Cup iyo laba FA Cup.
Riix 2 illaa 5 si aad u wada akhrisato